Okuhloswe wuSihlalo webhodi loMgeni Water | Isolezwe
Okuhloswe wuSihlalo webhodi loMgeni Water
intandokazi / 4 July 2019, 11:09am / BONISWA MOHALE
USIHLALO weBhodi yoMgeni Water uNksz Ziphozethu Gabsie Mathenjwa ufuna wonke umuntu athole amanzi ahlanzekile Isithombe:Motshwari Mofokeng/African News Agency(ANA)
UFUNA wonke umuntu waKwaZulu-Natal abe namanzi ahlanzekile uNksz Ziphozethu Busisiwe Gabsie Mathenjwa, onguSihlalo weBhodi loMgeni Water.
Igama elithi Gabsie alisilo isidlaliso ngoba lithathelwa esithakazelweni sakubo esithi Mgabadeli.
Ukuqinisekisa ukuthi abantu bathola amanzi ahlanzekile le ntokazi yaseManyiseni, eyakhulela eShowe ihlela ukwakha amadamu amathathu amanzi kule minyaka ezayo.
“Idamu elilodwa sesiyitholile indawo yokulakha kodwa kusazokwenziwa ucwaningo kuhlolwe imvelo nokunye okuningi okwenzeka ngaphambi kokwakha, sinethemba lokuthi kuzothi kuphela unyaka kube sekunyakazeka. Elesibili sizoxoxa noMnyango wezeziMali ngoba sizodinga ukuthi siyofuna imali. elesithathu elizoba seMkhomazi, inhloso yethu wukuqinisekisa ukuthi bonke abantu banamanzi ahlanzekile.”
Uthe iNingizimu Afrika yizwe elingenawo amanzi amaningi washo nokuthi njengoba kuyisebusika KwaZulu-Natal imvula ayibonwa.
Ukulwa nale ngqinamba yokungabikho kwamanzi amaningi eNingizimu Afrika, Umgeni Water uyawagcina amanzi ehlobo uma izulu lina.
Lawo manzi uNksz Mathenjwa uthe asetshenziswa ebusika ngoba benza njengentuthane eqoqa ukudla kwayo ehlobo.
Uveze ukuthi ufuna kube nohlelo lokuxoxa namakhosi nezinduna ngendlela abantu ababekwa ngayo ezindaweni zasemakhaya.
“Uthola ukuthi uma siletha amanzi ezindaweni zasemakhaya, imizi igqagqene kakhulu okusho ukuthi kufanele ufake amapayipi amaningi. Ngifuna kube nohlelo lokuxoxa nabaholi bendabuko ngalolu daba ukuze kube lula ukuletha amanzi.”
Uveze ukuthi ezindaweni eziningi abaletha kuzo ingqalasizinda yamanzi kufanele bavule umgwaqo ngaphambi kokuletha amanzi ngoba usuke ungekho esimeni esifanele.
Uthe banenkinga nabantu abakha kuma-floodlines okusho ukuthi imizi esendaweni ligcwala amanzi uma line kakhulu.
Udonse abantu ngendlebe wathi bangalokothi bakhe kulezi zindawo ngoba bazibeka engcupheni yokumuka uma kuna imvula enkulu.
UNksz Mathenjwa uneziqu zemfundo ezehlukene okukhona kuzo iBSC yeHydrology ayithola enyuvesi yaseZululand, amaMaster’s amabili, kuyimanje umatasa neMaster’s yesithathu.
Ugqugquzele abantu ukuthi bafunde ngoba imfundo ivula amathuba okukhula empilweni nasengqondweni.
“Abantu kufanele bafunde ngoba imfundo iyakusiza ukuthi wenze umsebenzi wakho kangcono, ukwazi nokuthola amanye amathuba. BengiseNew York kwi-Unted Nations ngiyokhuluma ngamanzi, inhlanzeko nabesifazane. Ngenhlanhla bengenza ucwaningo ngalolu daba,” kusho uNksz Mathenjwa.
Uthe iMaster’s yakhe yokuqala wayibhalisa ngo-2000 eneminyaka ewu-23, kwathi ngo-2009 wabhalisela eyesibili.
Ucele intsha ukuthi ingasheshi ukulahla ithemba ngoba yena wafaka izicelo zomfundaze ezingaphezu kuka-400 ngesikhathi eyongena enyuvesi.
Izicelo zomsebenzi nazo uthe ziningi ayezifaka kungabuyi mpendulo kodwa elokhu ezifakile.
“Ngaphandle kokuba wuSihlalo weBhodi yoMgeni Water, ngiwusomabhizinisi, nginenhlangano esiza umphakathi ngentuthuko ebuye ifake nezolimo, Insika Foundation. Ngiyabaqeqesha abantu ukuze babe namakhono azobasiza. Kubalulekile ukuthi osomabhizinisi nabo bafunde ngisho bengayanga esikhungweni semfundo ephakeme kodwa bafunde izincwadi ezizobasiza,”
Wenze isibonelo sokuthi uma uwusomabhizinisi uyadinga ukuqonda imithetho ebhalwe ezinkontilekeni, wazi nokuthi uma unabasebenzi kufanele ubabhalisele i-Unemployment Insurance Fund nezinye izimfanelo.
Uthe kufanele usomabhizinisi abe namakhono okuqasha abantu, awokuphatha imali, nolwazi lomthetho.
Umgeni Water ubalwa nezikhungo ezidume ngokuthola umbiko womncwaningi mabhuku omuhle. UNksz Mathenjwa uthe imfihlo yabo wukuthi bayamlalela umcwaningi mabhuku jikelele uma ebayalela ukuthi bathuthukise izingxenye ezithile zokusebenza.
“Sinamakomiti ahlukene ebhodini lethu abhekele ezokuphatha, ukusebenza, isimilo, ukuphathwa kwemali nezikhalo ezingenayo. Sinosihlalo ozimele obhekela izikhalo ezingenayo eMgeni Water. Lokhu kuyasisiza ukuthi siwenze ngendlela umsebenzi.”
UNksz Mathenjwa unamadodana amabili eyodwa ino-18 enye ineminyaka emibili, uthe abesifazane bangakwenza konke empilweni uma besihlela kahle isikhathi sabo.
Wenze isibonelo sokuthi uma ezohamba unkosikazi kamfowabo nonina baye bambhekele izingane.
“Abesifazane kufanele bakhulume ngemisebenzi yabo nangempilo nemindeni yabo. Sikhona isikhathi sokufunda uma uzihlela. Ungaba nosisi osizayo ekhaya ozohlanza indlu, apheke kodwa awukwazi ukuyalela lowo sisi ukuthi achithe isikhathi nezingane zakho noma anakekele umyeni wakho. Uwena okufanele uchithe isikhathi nezingane nomyeni wakho nabantu basemzini.”
Uphethe ngokugqugquzela abantu ukuthi bafunde kuma-FET bangawabukeli phansi ngoba ayadingeka amakhono ama-artisan neminye imisebenzi.
Uthe Umgeni Water uyabafundisa abantu ngokubanika imifundaze nokunye okuningi.
Uma kukhulunywa ngoMgeni Water uthe abantu abangacabangi amanzi kuphela kodwa babheke amathuba ebhizinisi ngoba le nhlangano iyasebenzisana nosomabhizinisi abahlukene kusukela kwabahlela imicimbi, abaphekayo, ama-artisan nabanye.